အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: လူအမြင်ကပ်စေသောဆုနှင့်ပြည့်စုံခြင်း
Posted by တီချမ်း at 6:24 AM
ချစ်တီရေ ...... တာဝန်ကျေပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲရေးရေး အခုလို မအားတဲ့ (အသည်းတွေ အစိတ်ပေါင်း ၁၅၀၀ လောက်)ကြားထဲက ရေးပေးလို့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တိုတောင်းတဲ့လူ့ဘ၀လေးမှာ အခုလိုလေး ဆုံခွင့်ရတာပဲကျေးဇူးတင်ရမှာပါ။ ပါလာပြန်ပြီ မောင် က။ ဘယ်လိုဖြစ်။ ငိုလိုက်မှာနော် ဗြဲ. ......
David Aye Myat April 29, 2009 at 9:44 AM
အန်တီချမ်း April 29, 2009 at 9:56 AM
ဒေးဗစ် ရေ နင့်မျက်နှာ ကို ငါ ဒီတသက် ပြန်မမြင်ချင်တော့ ဘူးလို့ ရေးတာဟေ့ တကယ်ပဲ
မိုးခါး April 29, 2009 at 10:17 AM
မအားတဲ့ကြားက ရေးပေးရတာလေ နော့
မောင့်နဲ့ အကျူအပျက်ခံပြီးရေးပေးရတာလေ နော့
but သို့သော်ငြား .. ဒူ့မှ တွေ့ချင်ဝူးချို့ရို့
တီကိုမုန်းတယ် တီကိုမုန်းတယ် ...
တီပြန်အော်သံ (နင်မုန်းတာထက်ပိုမုန်းတယ် ..) ဒီအချိန်တွင် တီသည် တောင်တတောင်၏ထိပ်တွင်ဖြစ်သည် .. စကပ်လေး လေတွင် တလွင့်လွင့်နှင့် .. မိုးစက်မိုးဖွားလေးများ တဖွဲဖွဲကျနေချိန် ..
ကောင်းကင်ပြာ April 29, 2009 at 11:41 AM
တီတွေ့ချင် ချင် မတွေ့ချင်ချင် တွေ့ချင်ပါတယ်
ကြယ်ဖြူစင်ရေ နင့်မျက်နှာ ကို ငါ ဒီတသက် မမြင်ချင်တော့ ဘူးလို့ ရေးတာဟေ့ တကယ်ပဲ အသဲကွဲဖို့လောက်ဘဲသိတယ်..
ဖိုးစိန် April 29, 2009 at 2:40 PM
ဖတ်စရာမှတ်စရာတွေအမျာ့ အများကြီးရှိတဲ့ထဲက ကိုယ့်စာမျက်နှာပေါ်လာ
ကိုယ့်ပိုစ့်ကိုဖတ် ကိုယ့်ကိုအားပေးစကားပြောကြားပေးတဲ့ အကိုအမတွေကို
then it keeps me thinking..........
ဒါကတော့ ကိုယ့်လိုက်ဖ် နဲ့ ကိုယ့်စတိုင်
ဖိုးစိန် မျောက်လောင်း ဖိုးရှုပ်
ဖိုးစိန် April 29, 2009 at 2:44 PM
ဖိုးစိန် April 29, 2009 at 2:47 PM
flowerworld April 29, 2009 at 3:00 PM
မတွေ့ချင်လဲနေဝေ့ နောက်အိမ်လာဖို့မခေါ်နဲ့ ဟွန်းးးးး
လုံးဝပဲ အစားမပါလို့ကတော့ ဒါပဲ
Anonymous April 29, 2009 at 3:26 PM
အောင်မလေး မန့်သွားကြတာ မိရောင် အဒေါ်ကို... တီရေ သေဖို့သာပြင်ထား တီ့ကိုသတ်ကြတော့မယ်တဲ့။ ပြေးထား ပြေးထား ...
ညည်ကလည်းအေ ဒီလောက်လေးမှ ပြေးရရင် အစထဲက ကျုပ်မသလျှမ်းဘူး။ ခွိခွိ (တီ့စကားပြောသံ)
wai April 29, 2009 at 4:00 PM
Your every single words are so green and wide (seinn gar).
Take care! I concern for your security. :P
စူးနွယ် April 29, 2009 at 4:12 PM
လူတွေ က စာထဲမှာ ခင်ရင် တမျိုး အပြင်မှာ တမျိုးမို့ပါ
mgnge April 29, 2009 at 11:36 PM
မတွေ့ ချင်ဘူးဆို လို့ ဝမ်းသာ လိုက်တာ
အာ ၀ါး x တစ် သိန်း
မတွေ့ လို သာပဲ တွေ့ များတွေ့ ရင်မောင်ငယ်တို့ အငြိမ်နေရမှာမဟုတ်ဘူး
မတွေ့ တာ ကောင်းတယ်
နန်းညီ April 30, 2009 at 6:17 PM